Bit By Bit - Ukudala ukubambisana okukhulu - 5.5.4 Nika amandla ukumangala
Manje ukuthi unabantu abanobugebengu obusebenza ndawonye ndawonye enkingeni yesayensi ehlakaniphile, futhi ugxile ekugxilweni lapho kungaba yigugu kakhulu, qiniseka ukuthi ushiye indawo ukuze bakumangaze. Kuhle kakhulu ukuthi ososayensi besakhamuzi baye babhala izinkanyezi eGalaxy Zoo kanye namaphrotheni ahlungwe eFoldit. Kodwa-ke, yilokho okushiwo la maphrojekthi okwenzelwe. Kuyinto emangalisa nakakhulu, ngombono wami, ukuthi le miphakathi ikhiqize imiphumela yesayensi engalindelekile ngisho nabakhi bayo. Isibonelo, umphakathi we-Galaxy Zoo uthole iklasi elisha lezinto zezinkanyezi ezibiza ngokuthi "I-Green Peas."
Ngaphambi kokuqala kwiprojekthi yeGalaxy Zoo, abantu abambalwa bebeqaphele izinto ezingavamile eziluhlaza, kodwa inzalo kubo yenziwe lapho uHanny van Arkel, uthisha wesikolo saseDashi, eqala intambo kwiforamu yezingxoxo zeGalaxy Zoo ngesihloko esithi: "Nika i-Peas I-Chance. "Intambo, eyaqala ngo-Agasti 12, 2007, yaqala ngamahlaya:" Ingabe uwaqoqa ukuze udle ?, "" I-Peas stop, "njalo njalo. Kodwa maduzane nje, amanye ama-Zooites aqala ukuthumela ama-peas abo. Ngokuhamba kwesikhathi okuthunyelwe kwaba ngaphezulu kwezobuchwepheshe nokuningiliziwe, kuze kube yilapho izikhala ezinjengalezi ziqala ukubonisa: "I-OIII line (umdwebo 'wepea', ku-5007 angstrom) ukuthi ulandela ukushintshela okubomvu njengoba \_(z\_) iyanda futhi iphela ku-infra-red cishe \_(z = 0.5\_) , okungukuthi akubonakali " (Nielsen 2012) .
Ngokuhamba kwesikhathi, ama-Zooite aqonda kancane kancane futhi ahlela ukubuka kwawo amaphizi. Ekugcineni, ngoJulayi 8, 2008-cishe unyaka ozayo-uCarolin Cardamone, umfundi wezezibalo ze-astronomy eYale kanye nelungu lethimba leGalaxy Zoo, wajoyina intambo ukuze asize ukuhlela i- "Pea Hunt." Umsebenzi owenziwe ngomdlandla wenziwa futhi ngoJulayi 9, 2009 iphephandaba liye lashicilelwa ezincwadini ze-Royal Astronomical Society ngesihloko esithi "Galaxy Zoo Green Peas: Ukutholakala Kwama-Galaxy" Okubaluleke Kakhulu Okukwenziwe Nge-Star (Cardamone et al. 2009) . Kodwa isithakazelo emahlathini asizange siphele lapho. Ngokulandelayo, baye bahlolisiswa ngokucwaninga okuqhubekayo yizinkanyezi emhlabeni jikelele (Izotov, Guseva, and Thuan 2011; Chakraborti et al. 2012; Hawley 2012; Amorín et al. 2012) . Khona-ke, ngo-2016, eminyakeni engaphansi kwengu-10 ngemuva kokuthunyelwa kokuqala nge-Zooite, iphepha elishicilelwe ku- Nature lihlongoze i-Green Peas njengencazelo ebonakalayo yephethini ebalulekile futhi ephazamisayo ekuboniseni indawo yonke. Akekho kulokhu okwakucatshangwa ngenkathi uKevin Schawinski noChris Lintott bexoxa ngeGalaxy Zoo kuqala ebhodini e-Oxford. Ngenhlanhla, i-Galaxy Zoo inikwe amandla lezi zinhlobo zezimanga ezingalindelekile ngokuvumela abahlanganyeli ukuba baxoxe.